Ekpere onye nwụrụ anwụ. ? Ememe ncheta, ịbụ ezigbo onye nwụrụ anwụ na mara mma
Ekpere maka onye ahụ nwụrụ anwụ. N’ime ya anyị nwere ike ịrịọ maka mkpụrụ obi ndị ahụ nọ n’ụzọ nke izu ike ebighi ebi ka ha wee nwee ike ịchọta udo ha chọrọ n’oge ntakịrị oge.
N'ezie, ọtụtụ n'ime anyị atawo ahụhụ ọnwụ nke onye di ezigbo nso, o nweghi ihe o mere ma o buru onye ezinulo ya ma obu enyi ya, ihe di nkpa bu na o bughizi n’uwa a, o gabiga ozo.
Ekwuru na ọ bụrụ n’ikpeghị onye nwụrụ anwụ ekpere, anyị ga-echezọ oge anyị kwesịrị ije n’ụzọ ahụ.
Peoplefọdụ ndị na-amụnye kandụl ma na-eme ebe ịchụàjà pụrụ iche iji cheta onye ha hụrụ n'anya mgbe ha na-ekpe ekpere.
Agbanyeghị, ndị na - aghọtaghị mmụọ ma bụrụkwa ndị na - ejighị ihe ime mmụọ kpọrọ ihe na - akatọ nkwenkwe a. Anaghị anụ ndị a, otu anyị si eme ka obi anyị dị ọcha.
1 Gịnị bụ ekpere maka ndị nwụrụ anwụ?
1.1 Ekpere maka onye ị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ
1.2 Ekpere maka ndi nwuru anwu
1.3 Ekpere maka ndị nwụrụ anwụ na ncheta ncheta ha
1.4 Ekpere maka ndị ezinaụlọ nwụrụ anwụ (Katọlik)
2 Ekpere onye ahụ nwụrụ anwụ ọ̀ ga-eme nke ọma?
Gịnị bụ ekpere maka ndị nwụrụ anwụ?
Enwere nkwenye na, ọtụtụ oge, ndị nwụrụ anwụ adịghị njikere ihu ụwa ahụ, ọ bụ ya mere anyị ji nwee mkpa ịkpọlite ​​ekpere maka onye ahụ nwụrụ anwụ iji nweta ezumike ebighi ebi.
Ekwenyere na n’ụzọ ahụ, onye ahụ nwụrụ anwụ nwere ike sachapụ mkpụrụ obi ha site na echiche dị nsọ dịka ekpere.
Dị ka ọ na-adịkarị bụ ime ụfọdụ ekpere mgbe e lisịrị onye ahụ nwụrụ anwụ, agbanyeghị na ọ bụ ezughi iji gaa na ha ekpere Ogologo oge na ọbụna nke a na-enyere aka iru uju na ihe mgbu maka nkewa nke ezi na onye ezinụlọ anyị ma ọ bụ enyi anyị.
Ọ na-eme ka anyị chee na anyị ejikọtara n'agbanyeghị anya.
Ekpere maka onye ị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ
Chineke, naanị gị bụ onye nwere ndụ.
Grant nyela anyị onyinye nke ịbụ onye amụrụ anyị na ebum n’uche ma n’otu aka ahụ mgbe anyị mezuru ya, ị na-akpọ anyị alaeze gị nke udo, mgbe ị tụlere na ebum n’uche anyị n’uwa a emezuola.
Abughi tupu ma ọ bụ mgbe ...
Taa achọrọ m igosi gị n’ihu ịdị umeala n’obi dị ukwuu ma n’ezie a ga-anụ arịrịọ m.
Taa achọrọ m ịrịọ maka mkpụrụ obi nke (aha onye nwụrụ anwụ) Onye ị kpọrọ izu ike n'akụkụ gị.
A na m ewelite ekpere a, maka gị onye isi, n’ihi na ọbụlagodi ajọ ebili mmiri ị bụ udo na-enweghị njedebe. Nna nke mgbe ebighi-ebi, nyeghachi ezumike na paradaịs nke nkpuru obi gi na ala eze gi nye ndi rapuworo njem a nke uwa.
Are bụ Chineke ịhụnanya na mgbaghara, gbaghara mmejọ na mmehie nke mkpụrụ obi a nke dị ugbu a n'akụkụ gị nye ya ndụ ebighi ebi.
Ọzọkwa, a na m arịọ gị nna, maka ndị niile nwerela iru uju maka ọpụpụ nke onye na-abụghịzighi iwe, meghee obi gị ma jiri ịhụnanya makụọ ha. Nye ha amamihe, ka ha wee ghọta ihe na-eme.
Nye ha udo ka ha wee nwee udo n’oge nsogbu. Nye ha otuto iji merie iru uju.
I meela, nna m ukwu, maka ịge m ntị taa na ekpere m ji mmụọ m ji eto gị, m wee jiri udo na udo wee nye gị ndị enweghị ya n'oge a.
Na-eduzi nzọụkwụ nke ndị na-emebisị ihe ugbu a ma mee ka ha nwee ọ joyụ nke ndụ.
Daalụ nna, amen.
Nwere mmasị n'ekpere maka ndị nwụrụ anwụ?
Mgbe onwu gasiri, enwere ndi ekwere obi ike, na enwere ike idi ndu ozo ozo, na obughi ihe nile furu efu kama na anyi nwere ohere ozo.
N’okwu Chineke anyị na-ahụ ebe e zoro aka iji nweta mgbaghara n’ụwa a ma ọ bụ nke ọ ga-abịa; Jizọs Kraịst n’onwe ya kwuru ya n’otu n’ime ọrụ ebube ya.
Ọ bụ eziokwu nke anyị enweghị ike isi na ya pụọ, ma e wezụga ịgha mkpụrụ na echi onye ọzọ ga-emere anyị otu ahụ.
Oh Jesus, naanị nkasi obi na oge ebighi ebi nke ihe mgbu, naanị nkasi obi na oke ihe efu nke ọnwụ na-akpata n'etiti ndị ọ hụrụ n'anya!
Gi Onye-nwe, Onye elu-igwe, ụwa na madụ hụworo iru-újú n’ụbọchị dị mwute;
Gi Onye-nwe, onye tiri mkpu banyere oke mmetụta ịhụnanya dị n ’ili nke enyị m hụrụ n’anya;
Gi, Jisos! na ị nwere obi-ebere maka iru uju nke ụlọ tiwara etiwa na obi nile nke kwara arịrị n’ime ya n’enyeghị nkasi obi;
Gi onwe gi, Nna hụrụ gi n'anya, nwekwara obi ebere maka anya mmiri anyi.
Lelee ha, Onye-nwe, lee ọbara nke mkpụrụ obi na-egbu mmụọ, maka ọnwụ nke onye bụ ezigbo onye nnwere onwe, ezigbo ikwesi ntụkwasị obi, Onye Kraist siri ike.
Legide ha, Onye-nwe, dịka ụtụ anyị na-enye maka mkpụrụ obi gị, ka i wee sachaa ya n’ime ọbara gị kachasị oke ọnụ ma were ya ozugbo ị nwere ike ịga elu igwe, ma ọ bụrụ na inwetụbeghị ya na ya!
Lee ha, Onye-nwe, ka I nye anyị ike, ndidi, ime ihe kwekọrọ n'uche gị na nnwale a dị egwu nke na-ata mkpụrụ obi ahụhụ!
Lelee ha, oh !, Jesus! maka ha nyekwara anyi na ndi no ebe a biri na mmekorita nke obi mmadu n'anya ugbu a, ma ugbua anyi na-eru uju na anaghi anya nke onye nke anyi huru n’anya, anyi na ezute anyi ozo n’eluigwe, ka anyi na-ebi na ndu ebighebi.
Obi abụọ adịghị ya, mara mma Ekpere maka ndị ị hụrụ n’anya nwụrụ anwụ.
Ekpere kacha mma maka onye nwụrụ anwụ bụ ndị sitere n'obi, nke anyị nwere ike ịhapụ ihe ọ bụla anyị bu n'obi.
Anyị na-ajụ maka ezumike ebighi ebi ya, n'ihi na Enwere m ike ịchọta udo ihe ị chọrọ
N'aka anyị na-arịọkwa ka anyị mejupụta anyị ike na ike merie oge ihe isi ike anyị nwere ike ịda.
E nwere ụfọdụ ekpere ndị nwere ike ịbụụrụ nduzi, ọkachasị n’oge ndị ahụ okwu anaghị apụta n’ihi ihe mgbu na mwute.
Ekpere maka ndị nwụrụ anwụ na ncheta ncheta ha
Odi nma Jisos, onye n’eme ihe banyere obi ojoo banyere ndu gi, were obi ebere hu nkpuru obi ndi anyi huru n’anya na Purgatory.
O Jesu, onye ji oke mmasị hụ nke gị n'anya, nụrụ arịrịọ anyị na-arịọ gị, sitekwa n'ebere gị nye ndị ị kpọpụtara n'ụlọ anyị ka ha nwee ezumike ebighi ebi n'obi gị infinito amor.
Nye ha ha, Onye-nwe-anyị, izu-ike ebighi-ebi, ma ka ọkụ gị ruo mgbe ebighị ebi.
Ka nkpuru obi nke ndi kwesiri ntukwasi obi site n'ebere nke Chineke zuru ike na udo.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ ikpegara onye ezinụlọ gị ekpere, nke a bụ ekpere kwesịrị ekwesị maka ndị nwụrụ anwụ.
Icheta onye ezinulo ma ọ bụ enyi gị nwụrụ n’ụbọchị dị mkpa bụ, n’ọtụtụ oge, enweghị atụ.
Nke a bụ n'ihi na ha bụ oge mmemme ma ghara ịbụ na onye ahụ nwere mmetụta efu, agbanyeghị na enwere ekpere ma ọ bụ ekpere pụrụ iche ime na ụbọchị ndị ahụ.
Nwere ike ncheta ụbọchị ọmụmụ, agbamakwụkwọ ma ọ bụ ụfọdụ ụbọchị ọzọ dị mkpa.
Ihe pụrụ iche gbasara ihe ndị a niile bụ ka ị ghara ichefu ya ma jụọ maka ebe ị nọ nwere ike nwee udo na nwayọ na nke ahụ gaa n’ihu na-ewusi ndị fọdụrụ n’elu ụgbọ elu ụwa ike.
Mgbe ụfọdụ ọ bụ omume ikpere ndị ezinaụlọ ndị ọzọ ọnụ ma kpalite ekpere n’ime ụlọ, cheta na okwu Chukwu kwuru na ọ bụrụ na mmadụ abụọ ma ọ bụ atọ dị mma ịrịọ maka ihe n’aha Jizọs, Nna nke nọ n’elu igwe ga-enye ndị ahụ rioro mere.
Ekpere maka ndị ezinaụlọ nwụrụ anwụ (Katọlik)
Chineke, gị onye na agbaghara mgbaghara mmehie ma chọọ nzọpụta nke mmadụ, anyị na-arịọ maka ebere gị maka ụmụnna anyị niile na ndị ikwu anyị hapụrụ ụwa a.
Nye ha n’alaeze gi ndu ebighebi.
Nke a bụ ekpere maka ndị nwụrụ anwụ dị mkpụmkpụ, mana mara mma nke ukwuu!
Ikpe ekpere maka onye ahụ nwụrụ anwụ bụ otu n’ime ọdịnala ochie ndị ụka Kraist nwere gburugburu ụwaỌ bụrụla nkwenkwe ikwere na ndị nwụrụ anwụ nọ n’ebe a na-eme ka ha dị ọcha ka ha wee banye n’alaeze nke eluigwe.
Nke a bụ ebe izu ike nke Chineke kere karịchaa maka ha, nke a gosipụtara ịhụnanya na-enweghị ngwụcha nke Onye-nwe nwere n’ebe ụmụ mmadụ nọ.
Na-ezukọta dị ka ezinụlọ Ikpe ekpere maka onye ezinaụlọ nwụrụ anwụ ma ọ bụ ịrịọ maka Mass ebe anyị nwere ike ịme ekpere na ekpere pụrụ iche na ndị enyi na ndị ezinụlọ anyị bụ omenala.
Nke a bụkwa ihe nkasi obi, dịka ihe ama na-egosi na anyị echefubeghị ezinụlọ anyị nakwa na anyị ga-ezukọta ọzọ.
Ekpere onye ahụ nwụrụ anwụ ọ̀ ga-eme nke ọma?
Ebumnuche nke ekpere nye ndị nwụrụ anwụ bụ. Rịọ maka enyemaka, enyemaka, nchebe na obi ụtọ maka onye ahụ na-anọghị n'etiti anyị.
Ọ ga-eme nke ọma. Ọ bụrụ na i jiri okwukwe na inwee nnukwu okwukwe na -ekpe ekpere, ọ ga-eweta ọtụtụ ihe ọma, ma onye nwụrụ anwụ ma nke gị.
Dios, Iche iche